20-ka miyan baryada salaadda raalli ahaanta | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 20 mfm salaadda tukashadeeda raali ahaanshahooda
20 mfm salaadda tukashadeeda raali ahaanshahooda
Sharciga Kunoqoshadiisa 28:13:
13 Oo Rabbiguna wuxuu kuu noqon doonaa madaxa, adoo baalal ma leh; Oo waxaad sara joogsan doontaa oo keliya, oo miyaanad hoos u dhici doonin, haddii aad dhegaysatid amarradii Rabbiga Ilaahiinna ah oo aan maanta kugu amrayo inaad dhawrtaan oo yeeshaan.
Maanta waxaan soo uruurinay 20 dhibic tukashada salaada ah fadliga rabbaaniga ah. Qodobbada salaadda ee loo yaqaan "Param" salaamkan waxaa dhiirrigeliyay Dr. Odukoya oo ah buur dabeed iyo wasaaradaha mucjisooyinka. Nicmada ayaa Ilaahay ku siinayaa waxay ku siin weydo. Markuu ku soo gaadho Nicmada Eebbe, waxaa irdaha horyaal la yaab leh wax aan lagaranayn. Farxadda ayaa Yuusuf ka kaxaysay xabsiga ilaa gurigii, nimcadii ayaa ka kaxaysay David duurka ilaa guriga, waxa u roonaaday Daniel iyo saddexdii saaxiibbada ahaa ee Cibraaniga ahaa, nimcadii ayaa Nexemyaah ka dhigtay inuu u wareego koob caadi ah oo u gudbo taliye.
Baryootankayga baryadaada waa in, isla nimcadaas kaaga jawaabi doonta adiga maanta magaca Ciise. Ilmo kasta oo Ilaah waa cunug la doorbido, laakiin Masiixiyiin badan ayaa wali addoonsada maanta maxaa yeelay Ibliisku waa tuug u yimid inuu erayga Eebbe ka xado qalbiyadeena. Markaad ku weydo ereyga Eebbe noloshaada, naxariis la’aan ayaad dooneysaa oo markaad weydoon weydo, waxaad la kulmi doontaa cay. Baryadaan salaadda ah ee loo duceeyo nimcada rabbaaniga ah waxay kugu xoojineysaa ruux ahaan inaad Eebbe ku xilsaarto ducooyinka nimcada. Markaad tukanaysid kuwan qodobbada salaadda, Ruuxaaga ruuxeedu wuu firfircoonaan doonaa noloshaada waxbarashaduna way kordhin doontaa sidoo kale eray kasta oo cadeyn ah oo aad ku dhawaaqdo qodobadan salaadda waxay ku dhici doonaan magaca Ciise. Ha daalin saaxiib, ducadan maanta ducee oo hel raallinimadaada rabbaaniga ah.
1. Aabe waan kuugu mahadnaqayaa sidaad u noloshayda ugu magacowday ciise magaca Ciise
2. Waxaan maanta shaaca ka qaadayaa in nimcada Ilaah ay ka muuqan doonto hawshayda oo dhan magaca Ciise.
3. Waxaan cadeynayaa in gacanta Ilaah ay igu taal dhamaan waxaan ku sameeyo magaca Ciise.
4. Nicmadaada awgeed, albaabbada aan suurtagalka ahayn ee guusha waxaa lagu furi doonaa magaca Ciise.
5. Adiga oo aan raalli ahayn, waxaan shaaca ka qaadayaa inaan madax u noqon doono oo aan dabada ku dhex jirin magaca Ciise.
6. Waxaan cadeynayaa inaan nimco u leeyahay dadka oo dhan, oo ay ku jiraan boqorrada magaca Ciise.
7. Nicmadaada darteed, ma jiro wax hub ah oo aniga iga dhan ah oo lagu sameeyay magaca ciise.
8. Waxaan cadeynayaa in koox kasta oo sharri ah oo aniga iga geesta ah, ay ku dul shubi doonaan madaxa cadaawayaashayda magaca Ciise
9. Sidii wakhtigii Yuusuf, qof walboo sharraxaya oo noloshayda shirqool u dhigaye, masiibadaas oo kale dib ha ugu soo laabato iyaga, oo aniga xaggayga iigu soo jeesta markhaati.
10. Sida maalmaha Daniel iyo asxaabtiisa, ha ii ogolaadeen in ay i kaladuwanaadaan asxaabteyda ku jira magaca Ciise.
11. Waxaan cadeynayaa in fadligaaga dartii, in aan 10 jeer ka fiicanyahay asxaabtaada
12. Waxaan shaaca ka qaadayaa inaad fadhigaaga ka fahamsan tahay macallimiintaada darteed.
13. Waxaan shaaca ka qaadayaa inaad raali ahaantaada u tahay wax kasta oo aan ku sameeyo barwaaqo magaca Ciise.
14. Sababtaada awgeed awgeed, waxaan ku socdaa guusha liibaanta magaca Ciise.
15. Nicmadaada awgeed, waxaan ku leeyahay magaca Ciise magac xigmad sarreeya.
16. Sababta oo ah Aabahaaga raallinimadaada aawadeed, dembiyadayda oo dhan, kuwii hore, waqtigan iyo mustaqbalkeyguba waa cafiyan yihiin magaca Ciise.
17. Aabbow, kuwa doondoonaya dhimashadayda oo dhan magacayga aaway ha ku dhacaan.
18. Aabbe, kuwa igu duceeyayow, weligood ha barakeeyeen.
19. Cid kasta oo igu habaartaa ha ku inkaarnaado magaca Ciise.
20. Aabbe waad ku mahadsantahay sidaad noloshayda nolosheeda ugu dhammaysay magaca Ciise.
article Previous15 salaadood oo ka soo horjeedda jinniyo carqaladeeya
Next article30 U ducee guusha ducooyinkaaga
Candy Janaayo 12, 2019 saacadu markay tahay 10:27 pm
Kahortaga # 9 - 1 Butros 3: 9 Shar shar haku abaal marin, cayna cay ha ku abaalmarin. Taas beddelkeeda, shar ku abaalmari adigoo ku barakeeya, maxaa yeelay, tan baa lagugu yeedhay inaad barako dhaxasho
Kahortaga # 19 - Matayos 5:44: "Laakiin waxaan idinku leeyahay, cadowyadiinna jeclaada, u barakee kuwa idin habaara, wanaag u samee kuwa idin neceb, una duceeya kuwa idin caaya oo idin silciya." Rooma 12: 14-20 ayaa intaa ku daraya:
U duceeya kuwa idin silciya, Niyad jab oo ha iska dhigin wax shar ah… Shar shar ha ugu celinina wax shar ah… haddii ay suurtagal tahay, intii aad adiga kugu tiirsan tahay, nabad kula noolaada dadka oo dhan. Gacaliyayaalow, ha isu aargudanina… Haddii cadowgaagu baahan yahay, daaji; Hadduu harraadsan yahay, waraabi; In so doing doing For For For For For Waayo, sidaad yeelin waxaad madaxiisa ku kor ururin doontaa duxulo dab ah. Sharku yuusan kaa adkaan, laakiinse sharka wanaag kaga adkow.
Sahr Muuse Yoonga Juun 18, 2020 Markay tahay 11:52 pm
MA OGTAHAY in Kitaabka Quduuska ahi sidoo kale kuu sheegayo in aadan u baahnayn in dabeyshuhu ku noolaado, ha daweeyo dhiiggooda oo cun hilibkooda?
Fransoa Juun 20, 2020 X XXX: 3 am
Aabe waxaan kaa baryayaa nimco aan kala joogsi lahayn oo kaaga timaada. Noo duceeya oo aan nimco ka helno wax kasta oo aan qabanno. Waxaan ka soo horjeedaa ruux kasta oo ku tagri falid iyo ilmo iska soo tuurid ah dhamaadka horumarka. Waxaan kugu amrayaa nimcadaada aawadeed inaan liibaanin innaba wanaag. Yaanu uheyn ina kala saarto kuwa kale ee magaca Ciise. Waxaan u duceynayaa horumar dhaqaale oo gacantigayga ku dhigo Ilaahow. Waxay ka heli doontaa raallinimada go'aan qaadashada ee Ciise magacyadooda. Maalintaydu adigay kugu fadhiday Eebow. Waxaan ilaahay ka baryayaa in nimcada rabbaaniga ahi waligeed ka tagin ninkayga. Waxaan ku baryayaa aaminaada iyo aaminta magaca Ciise ..
Fransoa Marso 8, 2020 X XXX: 3 am
Sayidow waxaan kaa baryayaa in ninkayga laga yaabo in laga sii daayo unugyada magaca Ciise. Rabbiga dhex mara, oo dacwadiisu raalli ha ka ahaato mid walba oo soo baxa, Xulufadu waa ay heli doontaa howsha lahaanshahana waxay raalli ka noqon doontaa qof kasta oo ku hawl gala magaca Ciise. Waqtiga loo baahan yahay in lagu guuleysto ayaa halkan ku jira Ciise. Fadlan noo xafid carruurta iyo ducada salaadda nin Ilaah. Samooyinku ha ku furnaadaan kiiskan Ciise.
taiye ibidun Abriil 19, 2020 XXX: 2 pm
Aabe ha ii ogolaado meeshuu ku shaqeeyo meesha aan joogo
Susan Juun 6, 2020 Markay tahay 9:31 pm
Aabe ii ogolow nimcadaada inay i soo hesho
Rabbi ha kaa raalli noqdo inaad maanta i soo hesho. Calaamadee wejiga iyo ninkayga si wanaagsan. Waxaan ka heli doonnaa raallinimada dhammaan meelaha aan tagno. Magaca Ciise ayaan ku baryayaa Aamiin
Adekunle Samson Luulyo 1, 2020 saacadu markay ahayd 9:41 am
1.Rabbiyow, raallinimadaada aawadeed, ha i sarrayso;
2. Aabe bishaan cusub nolosheyda ha ku soo aragto sida aad u wanaagsantahay ee dabiiciga ah dhamaan qeybaha nolosheyda ee magaca Ciise aamiin.
john M. isaac Luulyo 1, 2020 saacadu markay ahayd 11:41 am
Waxaan ka soo horjeedaa abeesooyinka shaydaanka oo dhan oo noloshayda ku qoran.
riyo kasta oo xun oo ku saabsan noloshayda oo isku dayaya inaan muujiyo, waxaan amar ku siinayaa dabka Ilaah inuu ku burburiyo magaca ciise
nimcada Eebbe igu hel magaca Ciise
Sam Nofeembar 11, 2020 saacadu markay tahay 11:04 pm
Waxaan jeclaan lahaa inaan qadariyo ninka ilaahay, kan gudbiya aragtidan; inbadan oo ka mid ah shaqooyinka nolosha iyo adeega magaca ciise ciise! Waan ku barakeeyay maqaaladaada mahadsanid.
30 Tilmaamaha salaadda ee xaaladaha aan macquul ahayn
30 Qodobbada Salaadda ee halista ah ee ka dhanka ah kuwa xadgudbaya